Oku kukucaciswa okunokwenzeka kweSurface Pro 5 | Iindaba zeGajethi
Oku kukucaciswa okunokwenzeka kweSurface Pro 5
Kunyaka ophelileyo iMicrosoft yazisa ngokusesikweni ifayile ye- Surface Pro 4, ethe yazuza impumelelo enkulu kwintengiso, nangona ingenguye uninzi lwethu oluya kuvuma ukuba esi sixhobo sele sidinga ukulungiswa. Oku kunokuba kufutshane kakhulu ukufikelela kwimarike, kwaye kudala sisiva amarhe malunga Surface Pro 5, apho iinkcukacha zayo kunokwenzeka khona ngoku.
Ngokwamahemuhemu baya kuza nawo Iiprosesa ze-Intel Kaby Lake ngaphakathi okanye zeziphi iiprosesa zesizukulwana sokugqibela. Oku kuya kuxhaswa ngeendlela ezahlukeneyo zememori ye-RAM eza kuyinika amandla angaqhelekanga njengoko sele kwenzekile kwiimodeli zangaphambili zeSurface Pro.
Ngokubhekisele kwiscreen, ixesha elide ngoku, sikwazile ukufunda nokuva amarhe malunga nokuba kungenzeka ukuba 4K isisombululo, nangona eli candelo lingekaqinisekiswa.
Izinketho zokugcina ziya kuba ngohlobo lwe-SSD kwaye ukuya kuthi ga kwi-512 GB, i-USB Type-C kunye namazibuko eThunderbolt, i-Surface Pen ekwazi ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngesihlanganisi semagnethi iya kuba zezinye zeempawu eziza kwenza le Surface Pro 5 a isixhobo phantse zonke iintlobo zabasebenzisi, nangona ixabiso laso liyakwenza kuthintele uninzi lwethu.
Okwangoku kwaye sele kungaphaya konyaka sidibene ngokusemthethweni neSurface Pro 4, UMicrosoft akakamiseli umhla wokuboniswa komsitho weSurface Pro 5, ezinokwenzeka kwiinyanga zokuqala zonyaka olandelayo 2017.
Ucinga ntoni malunga nokucaciswa kweSurface Pro 5 entsha?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » amacwecwe » Oku kukucaciswa okunokwenzeka kweSurface Pro 5
IBlackBerry Mercury inokubonwa kwimifanekiso